हुम्ला हवाई सम्पर्कविहीन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
हुम्ला हवाई सम्पर्कविहीन
प्रकाशित मिति २८ माघ २०७५, सोमबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
हुम्ला । दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला हवाई सेवाबाट समेत सम्पर्कविहीन भएको छ । चार दिनअघि परेको हिउँका कारण त्यहाको एक मात्र विमानस्थल पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
विमानस्थलको रनवेमा बाक्लो हिउँ जमेको छ । बुधबार दिउँसोदेखि हिमपातसँगै चलेको हावाहुरीका कारण सिमकोट विमानस्थलमा हिउँ बाक्लो जमेका कारण हवाई उडान बन्द हुन पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले बताए । लगातारको हिमपातले सिमकोट विमानस्थलको हिउँ पन्छाउने कार्य शनिबारदेखि शुरु गरिएको भए पनि अझै केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
विमानस्थलको हिउँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र एयरलाइन्सका कर्मचारीले पन्छाइरहेका छन् । बाक्लो हिउँका कारण जिल्ला बाहिर जोड्ने एक मात्र हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा पाँच दिनदेखि यात्रुले आवतजावत गर्न पाएका छैनन् । शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि विमानस्थलको हिउँ पन्छाउन थालिए पनि हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अझै दुई दिन लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन श्रेष्ठले बताए ।
हुम्लादेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेत जाने यात्रु तथा नेपागञ्ज र सुर्खेतदेखि सिमकोट आवतजावत गर्ने यात्रुसहित अन्य सामग्री ढुवानी गर्न नसकिएकाले सिमकोटमा दैनिक उपभोग्य सामानको पनि अभाव देखिन थालेको छ । खिरौला (सेतो चिनी) चार दिनसम्म हवाई उडान बन्द हुँदा सिमकोट विमानस्थलमै थन्किएको छ ।
भारी हिमपातसँगै चलेको तीव्र हावाहुरीले एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालयको छाना उडाएको छ । माघ ८ गतेदेखि पटक–पटक हिमपातपछि चलेको आएको हुरीले सदरमुकाम सिमकोटमै रहेको मानसरोवर मावि र सहारा समूहको छात्रावासको छानो उडाएको थियो ।
त्यसैगरी, बरगाउँस्थित रलिङ मावि, खार्पुनाथ गाउँपालिका–१स्थित मालिका मावि, प्युसास्थित कैलाश आधारभूत विद्यालयका छाना उडाएको मानसरोवर माविका शिक्षक धनबहादुर ऐडीले बताए । उक्त माविको कक्षा १२ को सबै कक्षा कोठाको जस्ता हुरीले उडाएपछि कोठाभित्र करिब तीन फिट हिउँ जमेको र फाल्नसमेत समस्या भएको उनले जानकारी दिए ।
फरक क्षमता भएका बालबालिकाको बसोबास रहेको छात्रावासको छानो उडाएपछि विद्यार्थीलार्ई समस्या भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए । अहिले छानो उडाएपछि फरक क्षमता भएका बालबालिका खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । लाली माविको दुईतले चार कोठा र कैलाश आधारभूत विद्यालयका आठ कोठाका छानो हुरीले उडाउँदा पठनपाठनमा समस्या भएकोे कैलाश माविका प्रधानाध्यापक भानुभक्त जैसीले जानकारी दिए ।
कोठामा राखिएका खाद्यान्न हिउँले भिजेकाले खाना पकाउनसमेत नहुने भएको छ । हिउँ र हुरीले विद्यालयको कार्यालय सञ्चालन गरिएको कोठामा समेत क्षति पुगेको छ । यसैगरी स्थानीय बासिन्दाका टिनले छाएका घरका छानासमेत उडाएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ निवासी तेजबहादुर शाही, जीतबहादुर शाही र लुर्के शाहीको घरको छाना उडाएको जितबहादुरले बताए ।
फेरि गेजुवाले किन पायो बूढीगण्डकी आयोजना ?
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा कम्पनीलाई फेरि दिने निर्णय भएको छ ।…
गंगामाया र डा.केसीको माग पूरा गराउन देउवा-पौडेलकाे दवाव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद यथावत रहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले आन्तरिक…
सेनाका जवानलाई डीडीसीको दूधलवेलावेलामा देखिने गरेको ‘मिल्क होलिडे’ कम हुने
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेनाका जवानहरूलाई पिउन दिन थालिएको छ। वेलावेलामा देखिने…
यसरी खुल्यो गाई काट्ने रहस्य ! नेपाली गाईबाट अमृत : विदेशी गाईबाट क्यान्सर !!
सबै प्राणीले अक्सिजन लिएर कार्बन विसर्जन गर्छन; गाईले (तर जर्सी गाईले …
सांसद र डीआइजी नै तस्करी र जुवामा
काठमाडौं । प्रहरी र नेता नै अवैध धन्दामा संलग्न भए तस्करी, जुवालगायतको धन्दा कसले रोक्न सक्ने ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका…